2010 ~ NPNGMyanmarP
11:03 AM NPNG(MyanmarP)
နိုင်ငံခြားမှာနေပြီး နိုင်ငံခြားသားနှင့် ရည်စားဖြစ်ချင်သောသူများ နှင့် ရည်စားဖြစ်နေသော မြန်မာ မိန်းကလေးတို့သည် ဒေါ်စုကိုအားပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရအပေါ် မကျေနပ်ကြချေ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒေါ်စုအား ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်းကြောင့် ဆိုရမည်။ လောကမှာ လုပ်ဆိုတာနဲ့ မလုပ်နဲ့ဆိုတာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွင် ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတဲ့အကျိုး ခံစားရမယ်။ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတဲ့အကျိုး ခံစားရမယ်။ လူတိုင်းသည် ဤအချက်ကို ကောင်းမွန်စွာ သိကြ၍ လိုက်နာသော သူများအတွက် အပြစ်ဆိုတာမရှိ အေးချမ်းနေကြ၏။ မလိုက်နာသော သူများအတွက်သာ မီးလိုပူတဲ့ သောကတွေကို ခံစားကြရရှာတာပါ။
ထောင် ဆိုသည်မှာ မကောင်းမှုကျူးလွန်သူတို့၏ အပြစ်ကိုဆေးကြောသော နေရာပင်ဖြစ်သည်။ ဒါကိုလည်း လူတိုင်းသေချာ နားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မည်သို့မည်ပုံ ထောင် ကျသည်ဖြစ်စေ။ အတိတ်ကံ အကျိုးပေးမကောင်းလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်ပြင်လို့ မရတဲ့အမှားတွေ မှားပြီးသူတိုင်းအတွက် ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ်သိအောင် အကျဉ်းချပြီး စိတ်တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီလူတွေရဲ့ ဘ၀ကို ပြန်လည်မွမ်းမံ ပေးတဲ့နေရာလို့ တရားမှာနားဖူးပါတယ်။ ထောင် ကျနေတဲ့ လူတွေကို ကိုယ်ချင်းမစာလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဘာမှမတတ်နိုင်တာ အားလုံးအသိပဲလေ။ သူ့အပြစ်နဲ့ သူခံနေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ထောင်ကနေ ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုသည်… ဆန္ဒပြသည်မှာ မှားယွန်းတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ အလုပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဖို့ တွေးခေါ်တတ်ရပါမယ်။
ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရတဲ့ လောကကြီးမှာ သနားမှုက လွဲရင် ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ ဇာတ်ကားတွေထဲကလို ထောင်ဖောက်ပြီးတော့ ကယ်နိုင်တယ်ပဲ ထားပါဦး။ ကယ်တဲ့လူက အမိုက်မဲဆုံးပါ… ဒီဘ၀မှာဖြစ်ဖြစ် နောင်ဘ၀မှာဖြစ်ဖြစ် အပြစ်ရှိလေတိုင်း နှစ်ဆ၀ဋ်ကြွေး ပြန်ဆပ်နေရပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားသည် ဒေ၀ဒတ်၏ အပြစ်များအား ခွင့်လွတ်သည်… ဒါပေမယ့် ၎င်းပြုလုပ်ခဲ့သည့် မကောင်းမှု အကုသိုလ်ကံက ခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့် အပ္ပာယ်သို့ သွားရရှာလေသည်။ ကိုယ်ကောင်းဖို့ကို အရင်လုပ်ပါ။ အပြစ်ရှိလို့ ထောင် ကျနေတဲ့ လူတွေကို လွတ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုမည့်အစား အပြစ်၏ သဘောသဘာဝကို သေချာသိရှိပြီး လုပ်ရမှာနှင့် မလုပ်ရမှာတွေကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်သော သူသာလျှင် လူတော်လူကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ပါမည်။ လူတုံး လူညံ့ လူအ လူယုတ်မာ အဖြစ်နှင့်သာ ရပ်တည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကို လက်ခံစရာ မလိုပါဘူး။ ကြိုက်သလိုသာ ခရီးဆက်နိုင်ပါတယ်။ အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကို လွတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာက အခုကြားနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ပြန်လွတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာကို ဆိုလိုတာပါ။ သူ့အပြစ်အတိုင်း သူခံပါစေ။ အပြစ်က လွတ်မြောက်တဲ့နေ့မှာ အားလုံးက လှိုက်လှိုက်လဲလဲ ကြိုဆိုရမှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ထောင် ကျတဲ့ လူတိုင်းရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေက အမြဲတမ်း တောင်းဆိုနေတော့မှာပေါ့။
ကျွန်တော်အနေဖြင့် ဘ၀င်မကျသော အမြင်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ မြန်မာပြည်နဲ့ ဆိုင်သူမှန်းသမျှကို ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ရှုရမှာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့သူမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်ပြီး၊ ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ ဖွံကြောင်ခဲ့သူမှာ ဗိုလ်ချုပ်၏သမီး ယခုလက်ရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင် မှားနိုင်ဦးမလား…? ၎င်းနောက်တွင် နိုင်ငံခြားသားနှင့်ပါ အတူတကွ နေထိုင်ကာ အကြင်လင်မယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းပြီး သားနှစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့လေသည် ဟူသော သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုက သေရာပါအမာရွတ် တစ်ခုလိုပဲ ကျန်ရှိနေဦးမှာပါ။ သူမနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးက ဆက်လက်ပြီး ဒုက္ခခံကြရအုံးမှာပါ။ အကျိုးနဲ့အပြစ် တွက်ကြည့်လိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အပြစ်ဖြစ်စရာတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက် အဖြစ်နှင့်သာ ကျန်ရစ်နေမှာပါ။ ငါးမင်းဆွေ ပြောခဲ့သလို ဒေါ်စုသာ မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဖို့ အမေရိကနှင့် အနောက်နိုင်ငံတွေကို အကူအညီမတောင်းပဲ အာဏာတက်မက်မှု ကင်းမဲ့ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီအချိန်မှာ တိုးတက်သင့်သလောက် တိုးတက်နေပါပြီး။ သူမ၏အဖေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလိုကိစ္စမျိုးကြီးကို လက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့ အပြင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မျိုးဆက်မှာ အရောင်မှိန်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မိုက်မဲမှု အပြစ်တွေနဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကို ချစ်တယ်ဟု သေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကြီးကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ထဲကပဲဖြစ်ဖြစ် ဗိုက်ထဲ၊ အသည်းနှလုံးထဲကပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာကပဲ ချစ်တယ်ပြောပြော ခွင့်လွတ်နိုင်စရာ မရှိပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ကျွန် ဖြစ်နေတုန်းက ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန်ရန်အတွက် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့၏ အကူအညီကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကို တိုက်ခိုက်ရာမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် အတွက် ဂျပန်တို့က ဗမာပြည်ကို ကယ်တင်ပြီး လွတ်လပ်ရေးပေးမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အင်္ဂလိပ် လက်အောက်မှ မြန်မာပြည်ကို ရရှိလာသောအခါ ဖက်ဆစ်ဂျပန်များ ကတိမတည်တော့ပဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖက်ဆစ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်လာကြပါတယ်။ ကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းမှာ ဂျပန်နှင့် ပေါင်းပြီးတိုက်တော့ လွတ်လပ်ရေးအတုအယောင်ကို ရရှိလိုက်တာကြောင့် မဟာမိတ်အင်အား အင်္ဂလိပ်နှင့်ပေါင်းပြီး ဗမာလွတ်လပ်ရေး အစစ်အမှန်ရရေးအတွက် ဦးတည်ကြိုးပမ်းရပြန်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် လွတ်လပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်တို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုသွားပြီး ၀န်ကြီးချုပ်အက်တလီနှင့် ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာ ဗမာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ရလာတဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြီးကို တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အကြီးအကဲတွေက တန်ဖိုးမထားပဲ ပြီးစလွယ်လုပ်မလုပ်ဆိုတာ စဉ်းစားနေတဲ့သူဟာ ဥာဏ်ပညာချို့တဲ့သူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်က ဘယ်တော့မှ အဲလိုမတွေးမိဘူး။ တွေးမိတဲ့လူတွေနဲ့ အမြဲတမ်း မဟုတ်မမှန် သတင်းမှားတွေ ရှိနေတာကြောင့် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်က အကုန်လုံးသည် မြန်မာလူမျိုးတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဘုရင်မှအစ ဆင်းရဲသား သူတောင်းစား မည်သူမဆို မြန်မာလူမျိုးမှန်သမျှ ချမ်းသာသုခ မရကြပါဘူး။ ဒီသဘောတရားကို လူတိုင်းနားလည်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတာအမှန်ပါ။ တစ်ချို့တွေက နားမလည်တော့ တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်ကို ဖျက်နေတယ်။ ဒေါ်စုက နိုင်ငံတော်ကို ဖျက်နေတယ်။ အတွေးအမှားတွေနဲ့ ဒွိဟဖြစ်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်း ကြိုက်တဲ့လူ နိုင်ငံကိုဖျက်၊ ပျက်စီးသွားလို့ တိုင်းတပါးသား အုပ်ချုပ်တဲ့အခါ မည်သူရဲ့အမျိုးတွေမှ လွတ်ငြိမ်းခွင့် ရမှာမဟုတ်ဘူး။
နိုင်ငံရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး စားသောက်နေတဲ့ မီဒီယာသမားတွေ နှင့် အတိုက်အခံ ပါတီတွေသည် မြန်မာပြည်သူလူထုကို အထင်အမြင်လွဲစေမည့် ပုံစံမျိုးတွေဖြင့် အမြဲတမ်း စည်းရုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး… အဲဒီတပ်မတော်က တိုင်းပြည်ကို ဖျက်နေတာဟု ပြောပြီး ကျွန်တော်(နိုင်ငံရေးသမား)တို့က မခံမရပ်နိုင်လို့ ပြည်ပကနေ နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီး အော်နေရတာပါ။ မြန်မာပြည်ထဲတော့ မ၀င်ပါရစေနဲ့ ခင်ဗျား(ပြည်သူတွေ)တို့ နိုင်ငံအတွင်းက ဒေါ်စုကိုဒီမိုကရေစီ ရအောင်လုပ်ခိုင်း၊ အဲဒါမှ ကျွန်တော်တို့တွေ မြန်မာပြည်ထဲ ၀င်လာလို့ရမှာ… ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ အပြစ်တွေက ကြီးမားပါတယ်။ ဒီအပြစ်တွေကို ချေဖျက်ပေးနိုင်တာ ဒေါ်စု တစ်ယောက်ထဲသာလျှင် ဖြစ်နိုင်မည်ဟု ဘယ်တော့မှ ဖွင့်ဟ၀န်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် တပ်မတော်ကိုတော့ ဆက်လက်မအုပ်စိုးစေပဲ လက်ရှိအစိုးရ လုပ်သမျှ ဆန့်ကျင်ပြီး၊ ယခု တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ ပူးပေါင်းအကောင်ထည် ဖော်ထားသည့် ဒီမိုကရေစီကိုပါ ဖျက်စီးဖြစ်ရန် နည်းမျိုးစုံ ကြံစည်နေကြရှာတယ်။ ပြည်သူတစ်ယောက် အနေဖြင့် သူတို့၏စကားတွေကို ယုံချင်လည်းယုံပါ။ မယုံချင်ရင်တော့ ယခုလို တွေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။ တပ်မတော်က နိုင်ငံကိုဖျက်လို့ နိုင်ငံပျက်တယ်ပဲ ထားပါအုံး အဲဒီတပ်မတော်က ဘယ်နိုင်ငံအထဲမှာ နေတာလဲ ဘာလူမျိုးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာလဲ… မိဘဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းက ဘယ်မှာလဲ ဘာလူမျိုးတွေလဲ ဒါကြောင့် အတွေးအခေါ် မတုံးပါစေနှင့် ဘယ်သူမှ မြန်မာနိုင်ငံ ပျက်အောင်လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မဖြစ်ပါစေနဲ့။
အခုကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေသည် အထင်အမြင် လွဲမှားမှုတွေကို ထောက်ပြရုံပါပဲ။ တစ်ချို့လူတွေက ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုတွေးမိရင် ဒီထက်ပိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ရှင်သန်နိုင်မှာပါ။ အဓိကတစ်ချက်ပဲ ခေါင်းထဲထည့်ပေးစေလိုပါတယ်… မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း အကောင်းဘက်ကနေ တွေးပါ၊ အကောင်းဘက်က ရေးပါ။ ဒါဆိုရင် မကောင်းတာလုပ်နေတဲ့လူတွေကို သင်မြင်တွေ့လာလိမ့်မယ်။
လိုရင်းရောက်ဖို့ အစချီလိုက်တာနဲ့တင် တော်တော်များသွာပြီး… ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာက ကျွန်တော်တို့လူမျိုး ကျွန် ဘ၀ရောက်ခဲ့တုန်းက အင်္ဂလိပ်တွေက မတန်တဆ ခိုင်းတယ်။ ညုင်းပန်းနှိပ်စက်တယ်။ အဆိုးဆုံးအချက်က မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ အိနြေ္ဒရည် သိက္ခာကို သူတို့၏ ကာမအလိုဆန္ဒကြောင့် လူမြင်ကွင်းမှာ ပေါ်တင်တစ်မျိုး၊ လူကွယ်ရာမှာ တစ်မျိုး ရအောင် သားမယား ပြုကျင့်ခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ မတရား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံခဲ့ကြသလား…??? ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့မြန်မာ အမျိုးသားတွေကရော ကျေနပ်ခဲ့ကြသလား။ ဒါမှမဟုတ် အဲလို ဖျက်စီးခံလိုက်ရတဲ့ မိန်းကလေး အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကရော ဂုဏ်ယူခဲ့ကြလား။ မခံနိုင်လို့ ပြန်ချတော့ အသက်ပါ စတေးခဲ့ရတာပဲ မဟုတ်လား။ မုန်းတီးသထက် မုန်းတီးလာပြီး နာကြီးချက်တွေ အလီလီတိုးခဲ့ရတာ အခုခေတ် မိန်းကလေးတွေ မေ့လျှော့နေကြပြီးနဲ့ တူပါတယ်။
၀မ်းနည်းစရာ အကောင်းဆုံးတစ်ချက်က ပြည်ပရောက်နေတဲ့ လူတော်တော်များများဟာ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေကို မကြည့်ကြတော့ပါဘူး။ အဲဒါက မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒေါ်စုက မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဖို့ အကြံပေးခဲ့သလို မြန်မာဇာတ်ကားတွေကို မြန်မာတွေက ပြန်အားမပေးမှတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးချစ်စိတ်တွေကို ကိုယ်တိုင် ပြန်ပိတ်ဆို့နေတာနဲ့ မတူဘူးလား။ အခုနောက်ပိုင်း အင်တာနက်မှာ Free Video တွေရှိနေတာတောင် မကြည့်ဖြစ်ကြတာ အရမ်းဆိုးလွန်းပါတယ်။ တိုင်းတပါးရောက်တာနဲ့ ကိုယ့်မြေ၊ ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်လေ ကိုယ့်နိုင်ငံထွက် ပစ္စည်းတွေက တန်ဖိုးနိမ့်ကျသွားစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ မိမိရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံဘယ်လောက်လှလှ ဘယ်လောက်ပဲ တိုးတက်နေပါစေ ကိုယ့်နိုင်ငံက ကိုယ့်မြို့လေးနဲ့ ယှဉ်ရင် အဆမတန် ကွာနေပေမယ့် အထင်ကြီး လေးစားတတ်တဲ့ စိတ်တွေ ဖျောက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖျောက်ခိုင်းသလဲဆိုတော့ အဲဒီစိတ်တွေ ၀င်လာရင် ကိုယ့်နိုင်ငံကို အထင်သေးသွားမှာ ဆိုးလို့ပါ။
ကိုယ့်နိုင်ငံဆိုတာက ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို ဆိုလိုတာပါ။ သမ္မတတစ်ယောက်ထဲ ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဦးသန်းရွှေ တစ်ဦးထဲ ပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ ကြံဖွံ့ပါတီ တစ်ခုထဲ ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ယောက်ထဲ ပိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးပိုင်စနစ် မဟုတ်တဲ့ အများပိုင်စနစ်၊ ပြည်သူပိုင်စနစ်တွေမှ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေက အပေါ်မှာ ရေးခဲ့သလို အထင်သေးနေမယ် ဆိုရင် မိမိကိုယ်တိုင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပေတော့။
ပြည်ပအသီးသီးမှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ရှိပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ တွေ့လို့နှုတ်ဆက် ဖြစ်တဲ့အခါ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ မေးမိတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ဥပမာ - မိန်းကလေးသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ပေါ့။
ကျား - ဘာလုပ်နေတာလဲ….သူငယ်ချင်း…..?
မ - ဇာတ်လမ်းကြည့်နေတာပါ…
ကျား - ဘာဇာတ်လမ်းလဲ….?
မ - အင်္ဂလိပ် ဇာတ်ကား… အရမ်းကောင်းတာ… မင်းသားက အရမ်းချောတယ်… (သို့) ကိုးရီးယားကား ကြည့်နေတာ ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့စည်းမှုက အရမ်းကောင်းတာ (သို့) ကာတွန်းကား၊ အက်ရှင်ကား စသည်အားဖြင့် ပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
ကျား - သြော်…ဒါနဲ့ ဟိုနေ့က ငါကြည့်ရတဲ့ ဇာတ်ကားအရမ်းကောင်းတယ် ကြည့်မလား….?
မ - ဘာကားလဲ….?
ကျား - မြန်မားကားလေ ဂျပန်ခေတ်က စစ်ကားပါ။ အဲဒီထဲမှာ ဂျပန်တွေက အရမ်းယုတ်မာတာ ငါတို့လူမျိုးက စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်လို့ ဒင်းတို့ကို တိုက်တုတ်ပစ်နိုင်တာ။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးတဲ့နောက်မှာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘ၀လုံခြုံလာတာနှင့် အမျှ တန်ဖိုးတွေလည်း ရှိလာတယ်နော်…
မ - ရုပ်တိမရှိပါဘူး…. မြန်မာကားတွေက စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်… မြန်မာကားဆို မကြည့်ဘူး… နိုင်ငံခြားကားတွေပဲ ကြည့်ဖြစ်တယ်… အခုလောလောဆယ်တော့ နင်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားက ကာတွန်းကားလောက်တောင် အာရုံမလာလို့ ငါဆက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်…
ကျား - အိုကေအိုကေ သူငယ်ချင်းတို့ အထင်ကြီးတဲ့ ကားတွေထဲ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေ ပါလာတဲ့တစ်နေ့ ငါ ၀မ်းသာနေမှာပါ။
ပြောလိုက်ရင်တော့ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီလေး မြန်မြန်ပေးကြပါ။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းပစ် ပစ္စည်းတွေကျတော့ ရွံ့သလိုလို အဆင့်အတန်းမရှိသလိုနဲ့ နေတတ်လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာတလွှား မြန်မာများပါလားနော်။ မြန်မာပြည်အတွက် တန်ဖိုးတော်တော် ရှိမယ့်လူတွေပါပဲ… တကယ့်တော့ တိုင်းတပါးကို နှစ်သက်ရင်းကနေ တိုင်းတပါး ယဉ်ကျေးမှုကို အတုခိုးလာကြတော့တယ်။ တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေ ပျက်စီးနေတာတွေ ကြားသိရ၍ သူတို့၏ မိဘများကို သနားမိပါသည်။ သို့ပင်သော်လည်း နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင်တော့ သူတို့သည်သာလျှင် မျိုးချစ်မိန်းကလေးတွေဟု ခံယူတတ်ကြသည်။ လက်ရှိဒေါ်စုအရေးနှင့် ပတ်သတ်လျှင် ကျွန်တော် တော်တော်များများရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို လေ့လာမိသလောက် အမေစုဟေ့လို့ အော်နေကြတယ်။ အော်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေထဲမှ အများစုသည် ပြည်ပရောက် မြန်မာမိန်းကလေးများ ဖြစ်နေကြသည်။ လေးစားပါတယ် အမေ…။ အမေစုလို သမီးတို့ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေမှာ ဘာတွေ လျှောက်ရေးနေမှန်း မသိသလောက် ရေးကြပါတယ်။ ဒါဆို ကျွန်တော် တစ်ချက်ပဲ မေးချင်တယ်ဗျာ… အထိတော့ မနာကြပါနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေလို့ ခေါ်ရင် အော်တိုမစ်တစ် သူ့ယောင်္ကျားကို အဖေခေါ်မှာလား….??? ဒီလိုကျတော့ ထိုမိန်းကလေးများ အနေဖြင့် ခေါ်ချင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်ပုံတွေကို နားမလည်လွန်းတော့ ခက်လှသည်။
ထို့အပြင် အခုလို ပြည်ပမှာနေ တိုင်းတပါးအထင်ကြီးပြီး တိုင်းတပါးယဉ်ကျေးမှုတွေ ကိန်းအောင်လာသူတွေဟာ အမေစုမှ လွဲရင်မည်သူကိုမှ စံထားတော့မည်မဟုတ်။ မတူညီတဲ့ ကွဲပြားချက်ရှိပါတယ်။ ဒေါ်စုသည် ရင်ဖုံးအင်္ကျီလေး ၀တ်ကာ သူ့လုပ်ခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေကို ဖုံးကွယ်ပါသည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာ မိန်းကလေးတွေကတော့ အမေ့ကို ချစ်လို့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်လို့ အမေ့ယောင်္ကျားတို့ နိုင်ငံကြိုက် ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ ရင်ကိုဖွင့်ကာ သမီးတို့ အပြစ်ကို ပေးဆပ်နေကြ၏။
ရာဇ၀င်မှာ ရိုင်းစေတဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ ရှိခဲ့တာတောင် မိန်းကလေးတွေ စိတ်မနာသေးဘူး။ တိုင်းတပါးမှာ ကဲချင်တိုင်း ကဲနေကြတာ ယနေ့ခေတ်မှာ မမြင်ချင်မှ အဆုံးပါပဲလား။ မြန်မာမိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်နှင့်အတူ ဘယ်လိုမှ မမြင်ရက်ပါ။ မလိုက်ဖက်ပါ။ အဲလို စုံတွဲတွေ တွေ့လေတိုင်း ရင်နာစွာ ခံစားရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး မိန်းမပျိုတွေသည် အရှက်အကြောက် အရမ်းကြီးကြတာ မှန်ပါတယ်။ အိနြေ္ဒရည် သိက္ခာရှိတဲ့ မြန်မာလို့လည်း သုံးနှုန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ခေတ်မှီသူတွေက အားနည်းချက်လို့ ယူဆပြီး ပြောင်းလဲပစ်လာကြတယ်။ ပြောင်းလဲသူတို့မှာလည်း ပြည်ပရောက်ဖူးသူတို့ အများဆုံး ဖြစ်လာကြသည်။ ကျွန်တော် သေချာနှိုင်းယှဉ် ကြည့်ပြီးပါပြီး။ ဒီလိုအတွေး တစ်ခုပဲထွက်ပါတယ်။ မှန်တယ် မမှန်ဘူးဆိုတာ စာဖတ်သူတွေက ဆုံးဖြတ်ပေးကြပေါ့။ မှတ်ချက် ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက အင်္ဂလိပ်တွေ၊ ဂျပန်တွေက မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို အတင်းအဓမ္မ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ မြန်မာမိန်းကလေးဆိုတာ အဲလောက်ကို မလိုတော့ဘူး။ အတင်းအဓမ္မ ပြုကျင့်စရာ မလိုလောက်အောင် နိုင်ငံခြားသားနှင့် နေရသည်ကို ဂုဏ်ယူတတ်လာကြသည်။ အမှန်တကယ်တော့ အရင်က မုဒိန်းကျင့်ခဲ့တဲ့ တိုင်းတပါးသားတွေသည် အခုချိန်မှာ ပေါ်တင်မုဒိန်း ကျူးလွန်လည်း ရနေပြီးဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး မိန်းကလေးတွေက တွဲသွားတွဲလာ လုပ်ပြနေကြတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အခုလို မဖြစ်စေချင်ဘူး။ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်မယူကြပါနဲ့။ ဘေးကသူငယ်ချင်း အချင်းချင်းကလည်း ယခုလိုမျိုး ကိစ္စတွေကို တားမြစ်ပေးကြပါ။ အမျိုးကို ချစ်တဲ့စိတ်မျိုး ထားတတ်အောင် ရှုံ့ချပေးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို မြတ်နိုးသည်ဟု သူတို့အမြဲ ပြောလေ့ရှိပါသည်။ ဒေါ်စုကိုလည်း သူတို့လေးစားကြပါသည်။ ချစ်ကြပါသည်။ ဒီမိုကရေစီလည်း လိုချင်လိုက်တာ ၀ယ်စုထားတဲ့ အ၀တ်အစားတွေ အသုံးချဖို့။ ဒါပေမယ့် မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေနဲ့ အမျိုးကိုလည်း ချစ်ပေးကြပါ။ အမျိုးဂုဏ်ကိုလည်း စောင့်ထိန်းပေးကြပါလို့ ဆိုပါရစေ။
ခန့်စည်သူ၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ နိုင်ငံတော်နှင့် ဆိုင်တဲ့ကားရိုက်လို့ ဆန္ဒ၀ိုင်းပြကြတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒါသည် အမှားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ နိုင်ငံခြားသား လက်ထဲမှာပလူးပလဲ ဖြစ်နေတာကိုကျတော့ ကြည့်ကောင်းလို့ ကြည့်နေကြတာလား။ ဒါမျိုးတွေကို ၀ိုင်းဝန်းရှုံ့ချရမည့်အစား ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း အနုပညာသမားတစ်ယောက် သူတတ်တဲ့ အနုပညာနဲ့ နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော ဇာတ်ကားရိုက်တာ သူ့ကိုဒုက္ခရောက်အောင် ထမင်းငတ်အောင် လုပ်စရာ ဘာရှိလို့လဲ… ခင်ဗျားတို့ ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ အမျိုးယုတ်နေတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေကိုသာ ထိန်းသိမ်းပေးကြ။ မျက်ကွယ်မပြုကြပါနဲ့။
ကိုယ့်ဘ၀ ရည်မှန်းချက်အသီးသီးဖြင့် ကြိုးစားနေထိုင်နေသော ပြည်ပမှ မိန်းမပျိုလေးများကိုလည်း ဤစာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်ရင် ကိုယ့်အမိမြေကိုချစ်ရင် ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို အရင်ခေတ်က တရားမ၀င် စော်ကားခဲ့တယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ တရားဝင် စော်ကားခံရဖို့အတွက် မိန်းကလေးတွေ ပိုက်ကွန်ထဲ မတိုးကြပါနဲ့လို့ မြင်နေတဲ့ အမြင်တွေကို ပွင့်လင်းစွာပဲ ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးကို ဘာကြောင့် ရေးရသလဲဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ထွက်ပြီးကတည်းက မြန်မာလူမျိုးယောင်္ကျားလေးတွေ အပြင် မိန်းကလေးတွေပါ အမေစု… အမေစုနဲ့ မီဒီယာတွေမှာ ပါဝင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်မျိုးကွဲနေပါတယ်… ပြည်ပမှာ အေးရာအေးကြောင်း ရည်မှန်းချက်ရှိရှိ နေထိုင်ပညာသင်ယူနေသူတွေက တော်ရုံတန်ရုံပါပဲ။ ထို့အပြင် တစ်ဖက်စောင်းမနင်းကြတဲ့အတွက် ငါးမင်းဆွေ တို့လို ဆောင်းပါးတွေအပြင် ဒေါ်စု၏ သမိုင်းကြောင်းကို ထောက်ကြည့်ပြီး တွေးခေါ်တတ်သွားသည်။ နောက်တစ်မျိုးက ပြည်ပမှာနေထိုင်ပါတယ်။ ဘာမှမသိပါဘူး… အမေစုလို့အော်ပါတယ်… တပ်မတော်သားတွေကို မကျေနပ်ဘူး… အမေစုဘက်ကရှိပါတယ်… အော်ပါတယ်… အော်နေလို့တော့ ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က ထိုမိန်းကလေးတွေသည် အမှန်တကယ် မြန်မာနိုင်ငံကို မချစ်တတ်ကြပဲ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ရင်းနှီးစွာနေထိုင်ကြပြီး ချစ်ကျွမ်းဝင်နေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ချစ်တာ မြန်မာပြည် ဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ လူမျိုးကိုတော့ မဟုတ်တော့ဘူး။ မြန်မာပြည် မပြန်ရလည်း ဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့ သဘောမျိုးပေါက်နေတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာကလည်း အခြေကျ စစ်ဗျုဟာကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ပြီးပြီးဆိုတော့ ဒေါ်စုလိုပဲပေါ့။ ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ ရွံ့ရှာမုန်းတီးမိပါတယ်… မရှိဘူးလို့ ငြင်းခုန်ချင်သူများ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ နိုင်ငံခြားသားနှင့် အိမ်ထောင်ကျသူတွေ၊ ချစ်သူအဖြစ်အတူတကွ နေထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်တယ်။ ကိုးကွယ်တယ်။ မြန်မာအ၀တ်အစားလေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေတွေ ထိန်းသိမ်းပြီးနေတာ မြန်မာလူမျိုးပါ။ သနားတတ်တယ်။ ဂရုဏာထားတယ်။ မေတ္တာတရား သဒ္ဓါတရား ထက်သန်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေပါ။ ဒီလိုလူမျိုးဆိုတာ ကမ္ဘာမှာအရမ်း ရှားလွန်းပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမို့လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး… လိုက်ရှာရင်တောင် နောက်တစ်နိုင်ငံ မရှိဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လေးစားမိတဲ့ အချက်က မြန်မာနိုင်ငံကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ စီးပွားရေးတွေ ပိတ်ဆို့ဒုက္ခအမျိုးမျိုး ပေးတာတောင် ရပ်တည်နေနိုင်တာပါပဲ။ ဒီလောက်ဆိုရင် အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ သဘောပေါက်နေလောက်ပါပြီး။
တစ်ချို့တွေက အမေရိကန်ကို အမေစုလိုပဲ အားကိုးနေကြတုန်းပဲ။ အမေရိကန်က မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်တိုက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေတဲ့လူတွေ၊ အော်စီက ၀န်ကြီးချုပ်ကို ဘယ်လိုတင်ပြမယ်၊ နော်ဝေးနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ညိုနှိုင်းမရတာတွေ ကနေဒါ၊ ထိုင်း၊ ဂျပန်၊ စင်္ကာပူမှာ အစည်းအဝေးတွေ လုပ်နေရပေမယ့် အချင်းချင်းလည်း ပြဿနာတက်နေတယ်လို့ ကြားသိရတာပဲ။ သူတို့ပါးစပ်ကတော့ အမြဲပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်သည်။ မြန်မာပြည်မှာ နေချင်တယ်။ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါပဲ ပြင်ဖို့လိုအပ်တာ... မြန်မာမကောင်းကြောင်းလေ၊ မိန်းကလေးတွေက အမျိုးကို မထိန်းသိမ်းကြ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှာက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ အလုပ်မဖြစ်လို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေက မလေးစားတော့တဲ့ အကြောင်းစုံလင်စွာနဲ့ပဲ တိုင်းပြည်ကို ၀ိုင်းဝန်းဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။
ဤလူတွေသည် သူတို့၏ အပြစ်တွေကို ဆေးကြောဖို့အတွက် ထောင်မလိုအပ်ပါ။ ကယ်တင်နိုင်မည်သူ တစ်ယောက်လိုအပ်နေသည်။ ထိုသူမှာ ဒေါ်စုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်မတို့က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်စုကိုပဲ အားပေးတယ်။ ဘယ်ပါတီတွေ မဲနိုင်နိုင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီက လွတ်တော်မှာ ပါတာမပါတာ ကျွန်မတို့မသိဘူး… ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာရမယ်ဆိုပြီး… ဘုမသိဘမသိ နိုင်ငံရေးယောင်ယောင် မိန်းကလေးတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်စုသည် သူ့လုပ်ရပ်တွေအတွက် သူတာဝန်မယူ နိုင်သေးပါဘူး။
နိဂုံးချုပ်ပြောချင်တာက ဒေါ်စုလုပ်ရပ်တွေသည် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို အိုးမဲသုတ်သည်ဟု ဆိုလျှင် သူ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေက ဒေါသဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤမိန်းကလေးတို့၏ အပြစ်များကို ပပျောက်အောင် လုပ်နိုင်သည်ကာ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ လုပ်ပေးခဲ့သည့် မြန်မာလူမျိုးအစစ်မှ ရင်ခုန်သံကို မထိန်းသိမ်းလိုက်နိုင်တဲ့ တိုင်းတပါးသား ရင်ခွင်ထဲက ဒေါ်စုကလေးနှစ်ယောက် မွေးပြထားလို့ပဲလေ...
ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မကျေနပ်ချက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ ပြောပါရစေ… အဲဒါအမှန်တရားတွေပါပဲ... ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုမျိုး မိန်းကလေးတွေ တိုင်းတပါးသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးတွေမွေးသွားမယ်ဆိုရင် လူမျိုးလည်းပျက်မှာပဲ။ ဒေါ်စုသည်လည်း ဒီအမှားကို ပြင်လို့မရတော့ဘူး… မိန်းကလေးတွေက ဘာမှမသိဘူး… ဒေါ်စုမှာ ဘာအပြစ်မှ မရှိဘူး။ ဒေါ်စုသည် အရမ်းလေးစားစရာ ကောင်းပါတယ်လို့ အမြဲတမ်း ပြောတတ်လွန်းလို့ ဒီစာလေးဖြင့် အားလုံးသိအောင် သေသေချာချာ ရှင်းလင်းပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်… ဒေါ်စုလိုမျိုး မမှားသေးတဲ့ မိန်းကလေးအတွက် ဆင်ခြင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအားလုံး အမျိုးကိုချစ်ကြမှာပါ ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေ အမျိုးဂုဏ်ကို စောင့်ထိန်းကြရအောင်လို့ ဆန္ဒပြုရင်း…………………….။